Guud - Creativos Online | Creativos Online (Bogga 6)
Haddii keegagu yahay sheygaaga, keegaggan tufaaxa ah ayaan kaa tagi doonin inaadan dan ka lahayn keega sameeya kaas oo ka dhigayay iyaga muddo sanad ah inay yeeshaan darajo aad u wanaagsan.
Soo qaado sawirrada roogagga hudheellada adduunka oo dhan waxaadna kasbataa 500 oo taageerayaal hal toddobaad gudihiis
Isticmaalahan, ayaa ku mahadsan gabadhiisa iyo madax adaygiisa uu ka qaadayo sawirrada roogagga adduunka oo idil, wuxuu kasbaday in ka badan 500 kun oo raacsan barta Instagram.
160 saacadood si loo abuuro muuqaalkan 600 megapixel ee cirka Manhattan
Sawir qaade ayaa qaaday 189 sawiro mudo sanad ah si uu dib ugu abuuro qeexitaan heer sare ah oo muujinaya cirka magaalada New York.
Waxaad horey ufiirin kartaa cusbooneysiinta cusub ee Photoshop CC oo la imaan doonta qalab cusub: Xulo Mawduuca.
Sheeko-xayeysiiyaha, waa qalab cusub oo bilaash ah oo loogu talagalay kartoonistayaasha iyo animators
Haddii aad tahay kartooniste, arday ama animator, Storyboarder waa qalab bilaash ah oo bilaash ah oo loogu talagalay abuurista sheekooyinka ku saabsan Windows, Mac iyo Linux.
Boggan 'Twitter bot' wuxuu awood u leeyahay inuu midabeeyo sawirradaada midab madow iyo caddaan ah
Akoonkan Twitter-ka ayaa awood u leh inuu midabeeyo sawirradaada madow iyo caddaan gebi ahaanba bilaash oo otomatig ah si aad ula yaabto.
3.500 oo sano oo xardhan dhagax ah waxay badali kartaa taariikhda fanka sidaan ognahay
Agate Combat of Pylos waa dhagax yar oo xardhan oo ay ku jiraan faahfaahin daqiiqad ah oo ku saabsan anatomy-ka aadanaha.
Tani waa sida loo soo celiyo shaqadii farshaxanka qarnigii XNUMXaad
Mold waa ganacsade farshaxan oo Twitter-ka ku tusaya shaqada culus si loo soo celiyo shaqadii sawir ee qarnigii toddoba iyo tobnaad
Wacom Pro Pen 3D waa aalad cusub oo loogu talagalay naqshadeynta, farshaxan sameynta iyo abuurista
Badhanka seddexaad ee Wacom Pro Pen 3D ayaa loo isticmaali doonaa si loogu qoondeeyo xoogaa hawl dheeraad ah oo waqtiga ilaaliya iyadoo aan lala macaamilin kumbuyuutarka.
Sawir qaadahaani wuxuu diiwaan gelinayaa sanadihii tagay muwaadiniin taxane ah oo ku nool New York
Funch waa sawir qaade mas'uul ka ah inuu na keeno baddaas wejiyada ee daadadka ka dhigaya waddooyinka New York muddo 9 sano ah.
Qaab dhismeedka quruxda badan maktabad Shiineys ah oo ku taal 1,2 milyan oo buug
Waxay ku taal Shiinaha waxayna ku taal 1,2 milyan oo buugaag ah oo laga aqrin karo goolashiisa ballaaran ee leh naqshad gaar ah.
Ka qayb qaado tartanka Adobe halkaasoo ay tahay inaad ka doodid aragtidaada
Abaalmarinno wax ku ool ah ayaa kaa sugaya tartanka cusub ee Adobe kaas oo erayga xorriyad u noqdo udub dhexaadka mawduuca loo qaabeeyey.
Xeerka saddex-meeloodowgu waa aasaaska xarriiqyada noo oggolaanaya inaan ku qurxino quruxda weyn sawir kasta oo muuqaal ah oo aan abuuri doonno.
U beddel qoraal si qalooca si looga fogaado khaladaadka daabacaadda oo hubi in mashruuckeenna garaafka uusan lahayn nooc khalad qoraal ah.
Görner wuxuu sawirayay 10 sano maktabadaha ugu quruxda badan ee naqshadaha ku wareegsan meeraha hal taxane aad u qurux badan.
Adobe wuxuu kudarsan doonaa tiknoolajiyaddiisa Cloak barnaamijyo kala duwan oo aad walxaha kaga saari karto fiidiyowga la duubay. Muuqaal layaableh.
Adobe ayaa cusbooneysiiyay Lightroom CC oo leh interface cusub iyo dhowr qalab cusub, iyo sidoo kale inuu yahay mid gebi ahaanba ku saleysan daruur.
Farsamooyin cilladaysan oo xirfadeed leh Photoshop
Farsamooyin isdaba-marin xirfadeed leh oo leh Photoshop si loo siiyo dhammeystir xirfadeed dhammaan sawirradaada. Baro Photoshop talaabo talaabo ah.
Graffica majaladda ay tahay inuu naqshadeeye kasta yeesho
Graffica majaladda ay tahay in naqshadeeye kasta uu ku haysto guriga haddii aad rabto inaad la socoto wixii ku soo kordha adduunka naqshadeynta.
Ku dhoola cadee Adobe Photoshop
Ku hel dhoolla-caddayn dhammaystiran Adobe Photoshop si dhakhso leh oo fudud, adigoo u keenaya dhammaan dhoolla-caddeynta aad sawirtay nolosha.
Ku dhalashada isbitaal ku yaal Japan oo maxalli ah, oo leh liis ku yaal sida makhaayad macaan
Haddii aad waligaa fasax ku joogto Japan, ogow haddii aad uur leedahay, liiska isbitaalada ay ka kooban yihiin waa nadiif macaan.
Sawirada jilicsan ee cayayaanka laga sameeyay bamboo
Saitoh waa farshaxaniste reer Jabaan ah oo naga tagaya isagoo la yaaban macaanida mid kasta oo ka mid ah farshaxankiisa iyo iftiinkiisa nolosha.
Red wuxuu ku qaadanayaa marxaladda dhexe ee dhajinta cusub ee loogu talagalay Star Wars: The Last Jedi, qaybta cusub ee sheekadan epic ee imaan doonta Diseembar 15.
Andre D. Wagner wuxuu na geynayaa tareenka dhulka hoostiisa mara ee New York halkaas oo uu ka sawirayay marinnada maalinlaha ah ee ka kaxeeya guriga ilaa shaqada.
Astaamaha dhaqanka pop ayaa lagu xardhay bocorka loogu talagalay Halloween
Habeenkii Halloween ayaa soo dhowaanaya oo sida sanad kasta, wuxuu noogu yeerayaa inaan xirno dhar kasta oo la xiriira argagixisada.
Buugaag kala duwan oo loogu talagalay dadka jecel hal-abuurka ee doonaya inay horumariyaan hal-abuurkooda si ka duwan, madadaalo iyo qaab u gaar ah.
Waa maxay buuga farshaxanka sidee buu kuu caawin karaa hadaad tahay hal abuure
Muxuu yahay buuga farshaxanka sidee buu kuu caawin karaa hadaad tahay hal abuure oo aad rabto inaad kobciso dhamaan shaqooyinka ku haray naqshadaha fudud.
Saamiga Dahabka ah
Saamiga Dahabka ah waa xeer loo isticmaalo in lagu soo saaro qodobka ugu quruxda badan halabuurka farshaxanka. Waxaa sidoo kale laga heli karaa dabiiciga.
In ka badan 1.000 qoraallo si qurux badan loo sawiray oo Jabbaan ah ayaa hadda laga heli karaa khadka tooska ah
Laga soo bilaabo Smithsonian waxaad ka soo dejisan kartaa in ka badan 1.000 qoraallo sawir leh si aad ula socoto qayb ka mid ah taariikhda Jabbaan boqollaal sano ka hor.
Qaabka "galaxy makeup"
"Galaxy Freckels" waxay u janjeeraan inay muujiyaan qaab kale oo wax loo sameeyo iyo in xiddigaha, xiddigaha iyo meerayaasha ay buuxinayaan wajiga.
Filimkii ugu horreeyay ee saliida lagu rinjiyeeyo wuxuu nolosha u keenaa Van Gogh
Filimkii ugu horreeyay ee saliida lagu rinjiyeeyo wuxuu u keenaa Van Gogh nolol leh natiijo garaaf ah oo gaar ah oo soo jiidata dadka jecel farshaxanka iyo kuwa jecel farshaxanka.
Baakadaha hal-abuurka ah si loo hagaajiyo iibinta wax soo saarka
Baakadaha hal-abuurka ah si loo hagaajiyo iibinta wax soo saarka iyo in suuqa looga istaago qaab asal ah oo hal abuur leh.
Inktober caqabad ku ah sawir qaadayaasha xiisaha leh
Inktober caqabad ku ah sawir qaadayaasha khad-jecel ee doonaya inay xirfadahooda farshaxanimo ku tijaabiyaan tijaabinta kuna dhiirrigeliyaan shaqadooda shabakadaha.
Smartify waa barnaamijka «Shazam ee Farshaxanka» oo tilmaamaya sawirada laga helo matxafyada adduunka
Smartify waa barnaamij isku dayaya inuu ku siiyo macluumaad dheeri ah markaad iskaanka ku sawireyso sawir sawir leh oo ku jira matxafka. Barnaamij bilaash ah oo loogu talagalay iPhone iyo Android.
Maqaarka Tiger oo leh Photoshop.
Waa maalinta isbedelka maqaarka la sameeyo. Labadaba wajigeena, gacmaha ama cagaha, waxkasta oo aad ugu jeceshahay. Anaga nafteena, saaxiib ama xubin qoys.
Mali, Banksy iyo zebra inay u janjeeraan nabarradooda
Banksy wuxuu mar labaad farshaxankiisa ku soo bandhigayaa qoraal ay ku qoran tahay 2015 oo muujinaya dameer barbar taagan haweeney weyn oo Afrikaan ah oo ilaalinaysa nabraheeda.
Sidee Loogu Midabeeyaa Sawir gacmeedka Photoshop Deg Deg
Sida loo midabeeyo sawir leh Photoshop si dhakhso leh qaabka ugu wanaagsan ee carruurta barashada si ay u bartaan aaladaha aasaasiga ah ee lagu sawiro Photoshop
Maanta waa maalintii aan bilaabi lahayn soo saarista dhiirigelinteena, fiiri casharkaan. Halkan waxaan ku tusaynaa sida loo abuuro sawir isku dhafan.
Ka saar wareegyada madow iyo dhibcaha maqaarka Photoshop
Ka saar wareegyada madow iyo dhibcaha maqaarka Photoshop si dhakhso leh natiijooyin xirfad leh. Ka hel maqaar joornaal dhammaan sawirradaada.
Qalabka lagu xusho sawirada Photoshop qaab xirfadeysan oo wax lagu barto si la iskugu daro aaladaha iyadoo kuxiran sawirka.
Sidee loogu gaboobayaa sawir leh Adobe Photoshop dhowr talaabo oo yar illaa aan ka da 'weyno sawiradeena natiijooyin aad u macquul ah.
Waxaan ku baraynaa inaad ku darto saamaynta bokeh, oo ah mid xilligan moodada, sawir ku jira Photoshop si aad ugaga tagto dhammaystir wanaagsan.
Dib-u-hagaajinta sawir deg deg ah oo lala socdo Adobe Photoshop dhammaan dadka doonaya inay dib u soo celiyaan sawirrada iyaga oo aan noqon xirfadlayaal Photoshop.
Casharradan Photoshop-ka ah, waxaad ka helaysaa sawir saddex geesood ah oo muuqaal leh, ka dibna waxaad u isticmaali kartaa asal ahaan.
Maxay kalluunka ka fikiraan? Mashruuc sawir ah oo uu sameeyay fanaanka Amaya Uscola oo ku saabsan waxa ay xayawaanadan biyaha yari ka fikiraan.
Haddii aad ka mid tahay dadka jecel naqshadeynta, waa inaad horey u maqashay CDay, oo ah dhacdo sanadle ah oo ay qabato Cutedrop, halkaas oo aadan ka maqnaan karin.
Xayeysiinta bulshada ee hal abuurka leh si loo badbaadiyo meeraha waxay dooneysaa inay abuurto nooc xayaysiis ah oo diiradda saaraya kor u qaadista wacyiga iyo iibinta alaabada.
Sida miisaanka loogu lumiyo Photoshop iyo waxyaabo kale oo xiiso leh oo kaa dhigaya inaad hesho majaladda majaladdaas ama sawir hal abuur leh oo xiiso leh.
Waa maxay naqshad? Waa wax naga caawin kara nolosheena siyaabo badan maadaama ay naga caawinayso inaan si wax ku ool ah u abuurno. Naqshadayntu waa wax walba.
Naqshadayaashu waxay rabaan macaamiishooda inay fahmaan wax walba, sidaa darteed halkan waxaa ku yaal tilmaamo ku saabsan hagaajinta adeegga macaamiisha, markaa fiiro gaar ah u yeelo.
Waxaan ku baraynaa sida looga saaro ama loo dhigo muuqaal asal ah aaladda xulashada degdegga ah, taas oo noo oggolaan doonta in asalka looga saaro jiffy.
Ma taqaanaa sida loo dhigo calaamadeynta Photoshop? Haddii aan dooneyno inaan ilaalino naqshadeynta, dhigida astaan-biyoodku waa muhiim. Waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo.
Si aad u noqoto naqshadeeye qaabdhismeed wanaagsan waxaad u baahan tahay inaad taqaanno sida loo arko oo loo ilaaliyo deegaankaaga, sidaas darteed u soo hel talada aan kugu siinno qodobkan.
Ma taqaanaa sida sawir loogu beero Photoshop? Waxaan ku tusineynaa sida loo adeegsado qalabka wax-soo-saarka ee casharkeena fiidiyowga ah.
Ma rabtaa inaad la kulanto dadka ay isku dareenka yihiin? Miyaad doorbideysaa inaad abaabusho dhacdo si aad u shaaciso shaqada aad qabato? Kulanku waa waxaad raadineysay.
Ku shaqeynta Freelancer badanaa waa mid ka mid ah riyada weyn ee loogu talagalay naqshadeeyayaasha iyada oo u oggolaaneysa iyaga inay yeeshaan madax-bannaanidooda.
Waa maxay farshaxanka garaafka naqshadeeya Google Doodles? waa su'aal aan dhamaanteen isweydiinay markaan aragno hal-abuurka Google.
Maanta waxaan soo bandhigeynaa cashar kuu ogolaanaya inaad abuurto saameynta "Andy Warhol", waa kuwan talaabooyinka lagu abuurayo, ee fiiro gaar ah u yeelo.
Waxay u muuqan kartaa waxoogaa qariib ah, in kastoo, runtiina, way fiicnaan lahayd haddii nashqadeeyayaashu ay baran karaan inay wax ku bartaan kuleejka, markaa fiiro gaar ah u yeelo.
Haddii aad ka mid tahay kooxdaas dadka ah ee doonaya inay bilaabaan wejiga naqshadeynta, qodobkani runtii wuu fiicnaan doonaa, markaa fiiro gaar ah u yeelo.
Coca-Cola, oo ah astaan ​​ka badbaaday waqtiga ka dib mahadnaq shaqo wanaagsan oo naqshad shirkadeed ah, astaanta ayaa waxyar iska beddeshay tan iyo markii la aasaasay.
Waxaan dooneynaa inaan ku tusno dhowr fikradood oo waxtar weyn yeelan kara, halkaas oo aan ku falanqeyneyno kiis kasta oo shaqo bilaash ah si fiican si laguugu shaqaaleysiiyo marar badan oo dheeraad ah.
Waxaan ku siin doonaa xoogaa tilmaamo ah oo kaa caawin doonin oo keliya inaad horumariso waxqabadkaaga markaad fulineyso shaqadaada naqshadeeye ahaan, laakiin sidoo kale maalintaada ilaa maanta.
Maxaad u adeegsan kartaa tixraac inta lagu jiro xilligaas dhiirrigelinta ah? Su'aashan awgood, qoraalkan waxaan uga hadli doonnaa shan istuudiyo animation.
Muhiimadda cilmu-nafsiga midabka ee farshaxanka iyo naqshadeynta
Muhiimadda cilmu-nafsiga ee midabka farshaxanka iyo naqshadeynta ayaa naga caawinaysa inaan abuurno shucuurtaas iyo dareenkaas aan raadineyno.
Sababaha loo sameeyo Buug Xusuus-qor ah
Joornaalada hal abuurka leh waxay ku siinayaan xorriyad dheeri ah waxayna kaa qaadayaan culeyska aan fiicnayn ee filashada sida ay dadku uga falceliyaan fikradahaaga.
Shaqadaadu qiimo ayey leedahay oo hadaad runti rabto inaad ku ixtiraamto tayadeeda, waa inaad lacag ka qaaddaa waxaad u malaynayso inay shaqadaadu qiimo leedahay, taasi waa waxa ay ku saabsan tahay.
Hababka analogga ama qaababka dhijitaalka ah, tani waa mid ka mid ah su'aalaha sidoo kale inta badan maskaxda ku soo dhaca naqshadeeyayaasha garaafyada.
Farsamooyinka sawir qaadashada ee la soo dhaafay oo dib loo abuuri karo xilligan la joogo
Sawir qaade Joni Sternbach ayaa caan ku ah sawiradeeda badmaaxayaasha iyadoo la adeegsanayo farsamooyin qarnigii XNUMX-aad.
Farshaxanada cajiibka ah ee dhijitaalka ah ee adduunka soo jiitay
Waxa aan ku naqaano farshaxanka dhijitaalka ah ayaa ugu sarreeya, mahadnaqa fanaaniinta heerka sare ah ee difaacay kana dhigay qayb iyaga kamid ah.
Haweenka Naqshadeynta: Abriil Greiman
Abriil Greiman waxaa loo yaqaan naqshadeeye naqshadeeye oo ku dhashay Mareykanka 1948.
Abuur hooska dhabta ah ee Photoshop si dhakhso leh
Si dhakhso leh u sameyso hooska dhabta ah ee Photoshop si aad uga dhigto sawirradaada sawirku inay leeyihiin dhammaystir xirfad iyo macquul ah.
Meelaha Ugufiican ee Laga Helo Moodooyinka Daabacaadda 3D
Daabacaadda 3D waa goob ugub ah oo mashaariicda naqshadeynta saddexda-geesoodka ah loogu turjumayo dunida dhabta ah.
Milton Glaser oo ah nashqadeeyaha ka dambeeya waxaan jeclahay New York wuxuu ku guuleystey inuu matalo Magaalada New York oo leh astaan ​​waligeed la xusuusan doono.
Waxyaabaha looga fogaado naqshadeynta markaan qaabeyneyno qoraalka si naqshadeena ay u noqoto mid wax ku ool ah oo aan u gaarno dhagaystayaal badan.
Javier Mariscal naqshadeeyaha aabaha Cobi mascot of the Olympics
Javier Mariscal, aabaha naqshadeeyaha Cobi, Mascot-ka Olimbikada, oo u istaagay qaabkiisa gaarka ah iyo qaabkiisa qaabeynta.
U beddel midabka bushimaha leh Photoshop qaab xirfadle ah, ku guuleysiga natiijooyin aad u macquul ah kal-fadhiyadayada sawir qaadista iyo taabashada ah.
Ardayga baranaya naqshadeynta garaafka waa inuu fuliyaa wixii uu ku bartay shaqadiisa waana kuwan tallaabooyinka lagu ogaanayo inuu runti wax bartay iyo in kale.
Soo-saarista dhijitaalka ah iyo teknoolojiyada cusub si loo qaabeeyo alaabta iyadoo la adeegsanayo nidaamyadan wax soo saar ee cusub Soo hel teknoolajiyadaan cusub.
Waa maxay taariikhda astaanta Google? Astaanteedu waxay soo martay isbadalo badan ilaa maantana waxay noqoneysaa hal xaraf. Soo ogow kuwoodii hore ahaa
Shirkadda Californian ee Google ayaa soo saartay degel cusub oo loo yaqaan Google Open Source.
Ku hagaaji tayada sawir leh Photoshop dhammaan sawiradaas oo aad dareemeyso nolol la'aan iyo fiiqnaan ...
Juan Roid ayaa qirtay in shabakada Mercadona ay “nuugto” isla markaana ay xaqiijiso isbedelada muhiimka ah ee sanadka 2018.
Paraidolia oo wejiyada laga helo walxaha hareerahayaga ku wareegsan ayaa ah saamaynta muuqaalka xiisaha leh ee naga dhigaysa inaan ku aragno wejiyada dhibco ku yaal derbiga ama xayawaanka daruuraha ku jira.
Wax qabad xilliyada dhibaatooyinka
Ma jirto xaalad ka liidata xilliyada dhibaatada, sidaa darteed dhimista kharashyada iyo qalabka ayaa lagama maarmaan noqon kara.
Xogtaada ka dhig mid soo jiidasho leh 5-ta barnaamij ee internetka si aad u sameysato garaafyo
Jaantusyada ayaa ah mid ka mid ah kuwa ugu wax ku oolka badan uguna waxtar badan marka ay timaado soo bandhigida habdhaqanka lambarrada.
Sida loogu iftiimiyo ilkaha sawirka Photoshop
Sida loo iftiimiyo ilkaha sawir leh Photoshop si loo gaaro ilko luul. Baro farsamooyinka dib-u-hagaajinta sawirrada xirfadeed.
Sida loogu diro astaan ​​macmiil qaab xirfadle ah si loo gaaro natiijo muujineysa xirfadeena sida naqshadeeyayaasha garaafyada.
Ka saarista jiirarka iyo cilladaha maqaarka ee leh Adobe Photoshop waa hab fiican oo loogu shaqeeyo qaabka sawir qaadista iyo xirfadlayaasha naqshadeynta ay u shaqeeyaan.
Ka dib shirkii sanadlaha ahaa ee loogu magac daray MAX ee San Diego oo lagu qabtay Adobe, shirkadan ayaa go'aansatay inay ka faa'iidaysato the
Waxa loogu yeero Mashruuca Neon wuxuu u taagan yahay mid ka mid ah fikradaha naqshadeynta oo leh filashooyinka ugu sarreeya ee dhinaca isticmaalayaasha barmaamijkan.
Sawirka muuqaalka ah ee gabayada ah ee sawir qaade Chema Madoz wuxuu ina geyn doonaa duni isdaba joog ah halkaas oo walxaha ay noo muujinayaan xaqiiqo taas ka duwan.
Muhiimadda calaamadeynta ee ku jirta mashruuca garaafka ayaa astaan ​​ka dhigeysa waxa ay dhab ahaan tahay, iyadoo ka dhigeysa shaqsiyaddeeda iyo habka ay u dhaqmeyso mid cad.
Sida loola dhaqmo saamaynta xawaaraha leh Photoshop ee sawiradaada ayaa kaa caawin kara inaad ku guuleysato in shey dhaqaaqa uu yeelan karo dhaqdhaqaaq.
Ku filan cawlada caadiga ah, laba jibbaaran iyo weel fudud. Hadda waxaan u soconaa kan ugu casrisan ugana wada xaajoon doonnaa habka cusub ee kor loogu qaadayo wax soo saarka.
Waxaan kuu soo bandhigeynaa 40 asalka ah CV-ga asalka ah si aad shaqsiyan ugu shaqeyso resumeygaaga una soo jiito dareenka shaqadaada cusub.
Raadi nooca qoraalka ee aad ugu baahan tahay qaabeyntaada
Raadi nooca qoraalka ee aad ugu baahan tahay naqshadeyntaada adoo adeegsanaya qalab muhiim u ah naqshadeeye kasta. Baro sameynta qoraalka si xirfad leh.
Maanta waxaan diyaarinnay 12 fikradood, weedho ay weheliyaan sawirro ka hadlaya qodobbo muhiim ah oo ku saabsan naqshadeynta garaafka sida xirfad-yaqaannimada.
Farshaxanistaha sawirada wuxuu u rogaa sawirada caruurtiisa sawirada dhijitaalka ah
Farshaxanistaha sawirada wuxuu u rogaa sawirada caruurtiisa sawir gacmeedyo dijitaal ah oo mala awaal ku raran yahay. Farshaxanistani waa tixraac hal abuur leh.
Kaararka ganacsiga ee hal abuurka ah iyo kuwa kala duwan ee shirkaddaada
Kaadhadh ganacsi oo hal abuur leh oo kaladuwan oo shirkaddaada ah oo kaa dhigaya inaad ka soocnaato tartamayaasha kale. Baro sida loo abuuro kaararka hal abuurka.
Xusuusashada nolosha xirfadeed ee naqshadeeyaha reer Colombia Dicken Castro
Dicken Castro, naqshadeeye caan ah iyo naqshadeeye naqshadeeye asal ahaan reer Colombia ah oo dhintay 21-kii Noofembar, 2016 da'da 95.
30 sano oo sheeko xarig ah oo goglan lagu sameeyay
Isticmaalaha ayaa gooyay gabal darbi ah oo ka mid ah astaamaha astaanta u ah ee Holland si uu u muujiyo 30 sano oo sheekooyin ah noocan farshaxanka waddada ah
Kaararka ganacsiga ee aan waligood ka bixin qaabka
Ma arko sida ugufiican ee looga tago xogta shirkadaada, adeegyadaada, shaqadaada, iwm, gacan sadexaad iyo isla markiiba.
Sida loola shaqeeyo naqshadeeye mashruuc garaaf ah
Sida loola shaqeeyo naqshadeeye mashruuc muuqaal ah waa wax macaamiil ahaan aan ogaanno. Baro inaad wax u barato macaamiisha sidii nashqadeeyaha aad tahay.
Dhacdadani waxay dhalatay qiyaastii 3 sano ka hor markii laba naqshadeeye ay go'aansadeen inay ku daabacaan shaqsiyaadka shaqsiyaadka naqshadeeyayaasha garaafyada shabakadaha bulshada
Abuur cilad ku jirta fiidiyaha leh Adobe Premiere oo ku hel natiijooyin xirfad leh mashaariicdaada maqalka. Hagaaji wax ka beddelka fiidiyahaaga.
Vitae-ga Manhajka ee Naqshadayaasha Sawirka: Cusbooneysiinno Asal ah
CV-ga aad u qaabaysan wuxuu siinayaa waxyaabo badan oo la yiraahdo haddii aad tahay naqshadeeye garaaf ah, xitaa intaas ka sii badan haddii aad khabiir ku tahay barnaamijyada iyo barnaamijyada kuu sahlaya shaqadaada.
Waa maxay waxyaabaha ay tahay inuu kombiyuutarkaagu haysto, si ay ugu fiicnaato markaad la shaqeyneyso mashaariicdaada naqshadeynta?
Abuur kala guur fiidiyoow leh 'Premiere' si fudud daqiiqad gudaheeda mahadnaq ahaan isdhexgalka dareenka leh waxaad u abuuri kartaa saameyn xirfadeed fiidiyowyadaada.
Maanta waxaan socod ku dhex mari doonnaa istuudiyaha naqshadeynta garaafka ee u taagan hal-abuurnimadooda, heer sare, is-beddelidda iyo waxyaabo kale.
Alaabta jilicsan ee Ikea ee carruurtu ugu talagashay ololaha bulshada ayaa carruurta adduunka ku nool u oggolaatay inay naqshadeeyaan carruurtooda jilicsanaanta jilicsan.
Waxaan u hibeyn doonaa boos maanta si aan wax yar uga ogaano naqshadeeyaha caanka ah ee naqshadeynta garaafyada Jessica Walsh iyo sida ay ku dhaqaaqday tallaabooyinkeedii ugu horreeyay
Naif qaabka caruurta hal abuurka leh oo midabkiisu ka buuxo wuxuu u saamaxayaa mala-awaalkeena una duulaa aduunka caruurnimadiisa halkaasoo wax walba ay macquul ka yihiin.
Haddii aad raadineyso mowduucyo loogu talagalay Google Chrome, liiskan oo ka kooban 96 mawduuc oo loogu talagalay biraawsarka waxaad hubaal ahaan doontaa mid kaamil ah oo ku habboon "isku-xirashada" isku-xirkiisa.
10 madax taxane TV ah oo lagu abuuray Motion Graphics
Farsamada 'Motion Graphics' waxaa loola jeedaa nooc duubis halkaas oo aan loo baahnayn in la isticmaalo dhammaan ilihii hore loo isticmaali jiray.
Lora zombie oo ah farshaxanka midabada qurxinta leh
Lora zombie farshaxanka ah unicorns sixirka midabada leh waxay maamushaa inay abuurto adduunyo sixir ah oo ay ka buuxaan astaamo iyo hal-abuur midabkiisu ka buuxo.
Joel Robison iyo sawirkiisa sawir gacmeedkiisa adduunka
Joel Robison iyo adduunkiisa sixirka ah ee sawir qaadista ah waa tixraac hal abuur leh oo loogu talagalay dadka jecel sawir qaadashada.
Baakad khamri ah oo lagu daydo khariiddada tareenka dhulka hoostiisa mara
"8 tikidhada" waa magaca khamriga dabiiciga ah ee lagu buuxinayo baakadan cusub.
10 cashar nolosha ah oo ka yimid naqshadeynta
Caanka caanka ah ee Paula Scher, oo ah jaantus muhiim u ah naqshadeynta garaafka, wuxuu na siinayaa 10 talooyin aasaasi ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha garaafyada,
Motion Capture ama MOCAP, oo ah furaha dhaqdhaqaaqa dhabta ah
MOCAP ama sidoo kale loo yaqaan mooshin qabasho, waa hanaan hawl lagu qabanayo si toos ah looga duubo.
Saul Bass aabihiis dhibcaha filimka
Saul Bass aabihiis dhibcaha filimka casriga ah ee u muuqda qaabkiisa garaafka ayaa si gaar ah ugu caan ah warshadaha filimka.
Sawirka shirkadu waa midka loo dalbado abuurista astaamo, sumado iyo wax kasta oo la xiriira aqoonsiga shirkad.
Abuur sawir leh qaabka Andy Warhol oo leh sawirradeenna, adigoo ku helayo sawirro hal abuur leh oo soo jiidasho leh qaab aad u fudud.
Furaha guushu waa inaad ahaato qof dhiirrigelin leh, iyadoo aan loo eegin shaqadaadu waxa ay tahay, waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaad had iyo jeer maskaxdaadu sii wado.
Fikradaha lagu abuurayo 5 jadwalka taariikhda
Haddii waxa aad rabto ay tahay inaad barato sida loo sameeyo jadwalka taariikhda ee macaamiishaada si fudud oo dhaqso ah, ha moogaan maqaalkan.
Laba erey oo shaki la’aan aad isugu dhawyihiin waana in wax qabad kaladuwan ay horseedaan in la gaaro natiijooyin kaladuwan.
Sida loo abuuro memes kuu gaar ah internetka si fudud
Sida loogu abuuro xusuustaada internetka qaab fudud. La wadaag dhammaan hal-abuurkaaga shabakadaha bulshada adoo abuuraya xusuustaada.
Farsamooyinka midabaynta sawirka Photoshop
Farsamooyinka lagu midabeeyo sawirka Photoshop oo nolol loogu siiyo sawirradaada qaab xirfadle ah oo aad u raaxo badan.
Muhiimadda waayo-aragnimada isticmaale ee nooc
Muhiimadda ay leedahay waayo-aragnimada isticmaale ee summaddu waa mid aasaasi ah haddii aan dooneyno in summaddeena ay ka soocnaato inta kale.
Sababta ay animatorsyaashu ugu labistaan ​​astaamahooda firfircoon gacmo gashi iyo silsilado
Sida galoofyada oo kale, silsilado ayaa loo adeegsaday si loo fududeeyo shaqada culus ee animator-ka kartoonka ah. Warner, Disney, iyo inbadan ayaa saxsanaa.
Naqshadayaasha qaabdhismeedka ugu wanaagsan ee Latin America iyo adduunka
Naqshadeeyaha garaafku waa xirfadle ay tahay inuu si fiican u maareeyo mid kasta oo ka mid ah ilaha iyo agabka iyo kuwani waa kuwa adduunka ugu fiican.
Wacom waxay soo bandhigi doontaa dhammaadka bisha Luulyo qalabkeeda cusub ee loo yaqaan 'Wacom Clipboard' kaas oo u oggolaanaya in foomamka waraaqaha loogu beddelo qaab dijitaal ah qaab fudud.
Abuuritaanka sawir-qaadis macquul ah oo leh Photoshop mashaariicdaada garaafka ah ayaa aad muhiim u ah haddii aad raadineyso natiijooyin hal-abuur iyo asal ah.
Waxaa lagu dabaqay naqshadeynta garaafka, Millennial Branding wuxuu tilmaamayaa dhanka ku noqoshada naqshadaha ugu fudud uguna yar.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu adag aragtidayda waa inaan sawiro jirka bini'aadamka, marka hore inaan awood u yeesho inaan qabsado faahfaahin kasta oo ka mid ah ka dibna ku dhejiyo warqad.
Ku abuur dhibco Adobe Premiere mashaariicda maqalkaaga si fudud oo xirfad leh. Ku dar dhibco fiidiyowyadaada Premiere.
Talaabooyinka lagu abuurayo astaan ​​wanaagsan oo loogu talagalay nooc ama shey si wax ku ool ah u shaqeynaya oo gaaraya tiro badan oo isticmaaleyaal ah. Samee astaan ​​wanaagsan.
Sawirada dhijitaalka ah, noocyada iyo astaamaha
Sawirka dhijitaalka ah wuxuu ka kooban yahay matalaad laba-cabbir ah oo muuqaal ah oo ku saleysan jaantus lambar, oo guud ahaan laba-cirif ah, oo leh kuwo iyo eber.
Hantida caqliga ahi wax kale ma aha ee waa wax kasta oo ka soo baxay garaadka, kana soo baxay maskaxda shaqsi, markaa iska qor shaqadaada.
Waxaan ku bilaabi doonnaa qeexitaan, waa maxay Patreon? Waana in Patreon uu yahay barxad taageero siisa shaqsiyaadka ...
Bar diiradda saar Photoshop si wax uga dhex muuqdaan sawirka
Habka dhibcaha leh Photoshop si loo muujiyo wax sawir ah waa hab ay si ballaaran u isticmaalaan sawir qaadayaashu. Ku muuji meelaha muhiimka ah sawirradaada.
Shuruudaha Naqshadeynta Naqshadeeye kasta oo Sawir Sameeya Waa inuu Ogaadaa
Sida had iyo jeer dhacda, eraybixinta loo adeegsanayo waaxda inta badan ma fahmaan dadka aan ka tirsanayn, haddaba fiiro gaar ah u yeelo!
Sawir qaadis leh saameyn riyo ah Photoshop oo leh natiijo soo jiidasho leh
Sawir qaadasho leh riyo ku jirta Photoshop iyadoo ujeedadu tahay in lagu gaaro sawir soojiidasho leh muuqaal muuqaal aad u cajiiba.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa qaar ka mid ah cunsurrada go'aamin doona guusha uu gaari karo qof kasta oo doonaya inuu noqdo soo saare sawir leh.
Kala sarreynta muuqaalku waa mid ka mid ah furayaasha qaabeynta marka la abuurayo sawirro daabacaad ama adeegsi dhijitaal ah.
Maqaalkan waxaan ku baran doonaa sida qaabeynta qaabdhismeedka ay si xariifnimo leh ugu martay noocyada dokumenteriyada si loo faafiyo naqshadeynta garaafka.
Abuuritaanka calaamadeysan oo leh "InDesign" si deg deg ah oo fudud ayaa suuragal ah iyada oo ay ugu wacan tahay fudeydka weyn ee ay InDesign noo ogolaatay in aan ku shaqeyno
Hoos mooddo iyo laydhadhka 'Photoshop' qaab macquul ah oo natiijo fiican ka gaadho dhammaan sawirradaada oo aad dib ugu soo celiso hab xirfad leh
Sida loo abuuro GIF animated ah Photoshop si dhakhso leh oo fudud
Sida loo abuuro GIF-ga firfircoon ee Photoshop si dhakhso leh oo fudud waa wax aan dhib dambe u hayn Photoshop iyo qalabkiisa fiidiyowga.
Behance, shabakada bulshada ee ugu weyn Adobe ee hal abuurka, waxay u soo bandhigaysaa adeegsadayaasheeda awood ay kula wadaagi karto dhamaan mashaariicdooda adduunka intiisa kale ee hal abuurka leh.
U qaabeynta boodhadh sax ah si loo gaadho dhagaystayaal aad u tiro badan shaki la’aan waa ujeeddada weyn ee naqshadeeye kasta. Baro sida loo sameeyo boodhadh run ahaantii shaqeeya.
Sida loogu guuleysto saameynta majaajillada kaliya 8 tallaabo
Qaadashada sawir fudud oo aad kuhesho saameyn majaajilo ah iyada oo loo marayo Photoshop waa waxa ugu fudud ee aad ku guuleysan karto adigoo uga mahadcelinaya 8-da tallaabo.
Sida loo sameeyo naqshadaynta tifaftirka oo leh boggag sayid ah oo ku yaal 'Indesign' si ay si xirfadaysan ugu qaabeeyaan dhammaan noocyada mashaariic muuqaal ah
Ku soo celi sawir duug ah Photoshop si aad nolol cusub ugu siiso. Ku soo celi sawiradii hore ee carruurnimada sida ugu fudud ee talaabooyinkan.
Abuuritaanka ficillada Photoshop si waqtiga looga ilaaliyo nidaamka tafatirka waa fikrad fiican inaad isku dabaqdo sawirro badan.
Marka xigta waxaan ka hadli doonaa talaabooyinka ay tahay inaad raacdo si aad u sameysid qaab-dhismeedka 'Excel' ee miisaaniyadaha, oo gabi ahaanba wax laga beddeli karo.
Sida loo abuuro lambar QR ah dallacsiin hal abuur badan
Abuuritaanka lambarka QR ee loogu talagalay dhiirrigelinta hal abuurka badan ayaa ah beddel wanaagsan oo lagu kordhiyo saameyntaada xayeysiinta. Baro sida loo abuuro nambarka QR.
Maqaalka maanta waxaan kaala hadli doonaa khaladaadka ugu caansan ee ay tahay inay naqshadeeyayaasha garaafyadu ka fogaadaan sameynta.
Ku beddel midabka indhaha Photoshop si dhakhso leh oo fudud si aad u hesho natiijo aad u xirfadaysan oo macquul ah sawirradeenna.
Haysashada qaamuus wanaagsan oo ah ereyada naqshadeynta garaafka iyo macnayaasha ayaa kaa caawin kara waxyaabo iyo shaqadeena in badan ka fudud.
Isku qor koorsooyinka 50% ee Trazos_ ee loogu talagalay naqshadeeyayaasha garaafka, 3D, dhaqdhaqaaqa ama takhasusyo kale sida soosaarka maqalka.
Soo ogow sida loo adeegsado miirayaasha sawir-qaadaha iyadoo la adeegsanayo xeelado yar yar sida inaad qarinaysid qaybo ka mid ah sawirrada ama muujiso.
Ayaa abuuray astaanta caanka ah ee dhoolla-caddaynta?
Ayaa abuuray astaanta caanka ah ee dhoolla caddaynta farxadda leh? Wuxuu ahaa farshaxan yaqaan yar laakiin mid calaamadeyn doona taariikh kahor iyo kadib taariikhda.
Pantone wuxuu noqdaa nidaamka midabka lagu go'aaminayo oo codka saxda ah la aasaaso kaas oo inta badan loo isticmaalo naqshadeynta garaafka
Ku hagaaji tayada sawirka Photoshop si fudud oo dhaqso ah
Kordhinta tayada sawir ee Photoshop si fudud oo dhaqso leh waa suuragal iyadoo loo mahadcelinayo tas-hiilaadka barnaamijkan Adobe noo ogolaanayo.
Iyada oo loo marayo qoraalkan waxaan rabnaa inaan ku tusno qaar ka mid ah tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah noqoshada naqshadeeye web xirfad leh.
Adiga oo ah naqshadeeye web, waa inaad ogaataa waxa ay yihiin talaabooyinka ay tahay in la qaado marka lala shaqeynayo macaamiisha iyo waxa laga qaadayo.
Naqshadeynta tifaftirka ayaa ah laanta naqshadeynta garaafka ee ujeeddadeedu ugu weyni tahay qaabeynta iyo halabuurka nooc kasta oo daabacan ah.
U adeegso sawir qorista sawirrada gudaha sidii soo jiidasho naqshadahaaga ah, adiga oo ku guuleysanaya natiijooyin aad u hal abuur iyo indho qabad leh. Si fudud, dhakhso leh oo balwad leh.
Naqshadeynta qaabdhismeedka qaabdhismeedka ama Flat design ayaa la bilaabay adduunka naqshadeynta garaafka iyo webka sanado ka hor waana la joogaa.
Lix tallaabo oo lagu kicinayo hal-abuurka
Mid ka mid ah tayada ugu muhiimsan ee ay leeyihiin naqshadeeyayaasha garaafku ama ay leeyihiin, shaki la'aan waa hal-abuur. Marka hala helo hal abuur!
Sida loo qaato naqshad loo daabaco adigoon ku dhiman isku dayga waa wax ay tahay in naqshadeeye kasta xakameeyo. Ka gudubka naqshadeynta kumbuyuutarka illaa warqad waa lagama maarmaan.
Baro sawirada Cuban laga soo bilaabo qeybtii labaad ee qarnigii 50-aad ilaa iyo maanta waana inta lagu gudajiray XNUMX-meeyadii ee xayeysiinta xayeysiintu asal ahaan ka timid.
Adobe Premiere iyo saamaynta fiidiyowga
Adobe Premiere iyo saamaynta fiidiyowga ee horay loo sii cadeeyay ayaa ah xulaf weyn marka ay timaado tafatirka fiidiyowga si deg deg ah oo fudud. Fiidiyowyo soo jiidasho leh oo leh Premiere.
Qaabkee ayuu naqshadeynta garaafku u raacaa?
Naqshadeynta naqshadeynta ayaa mas'uul ka noqon doonta qaabeynta aagaggaas oo ugu dambeyn u soo saari doona moodooyin astaamo u ah shirkadooda.
Graffiti iyo xiriirka ay la leedahay naqshadeynta garaafka
Graffiti wuxuu ku xirnaan doonaa naqshadeynta garaafka ku dhowaad markii ugu horreysay tanna waa hab lagu muujiyo dadweynaha.
Horumarinta madaxyada waxay noo ogolaaneysaa inaan ku ogaano aragtida ugu horeysa nooc ama isbeddel iyo naqshadeynta websaydhku wax badan ayey ku leeyihiin tan.
Midabyadu waa cunsurrada muuqaalka ah ee nolosha iyo kala-sooca siiya deegaankeenna. Midab la’aan, noloshu waxay noqon laheyd macno la’aan.
Haddii aan la helin naqshad muuqaal ah suurta gal ma ahan in la sameeyo waxyaabo fantastik ah iyo naqshado abuuraya shucuur dadweynaha dhexdeeda ku raaxeysanaya.
Baro taariikhda haweenkii ugu horreeyay uguna saxsan ee naqshadeeyayaasha adduunka naqshadaynta iyo ahmiyadda ay u leeyihiin qaybtan.
Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa ay ku adag tahay in la naqshadeeyo kombuyuutarka ama loo maro Mac, waxaan ku tusi doonnaa midka ugu fiican, iyadoo kuxiran waxa aad u baahan tahay.
Naqshadeynta garaafka waxaan kula kulmi karnaa qaabab badan oo muuqaal ah, mid walbana leh astaamo iyo shaqooyin kala duwan, sidaa darteed baro iyaga.
Baro inaad si dhakhso leh oo fudud u saxdo cilladaha maqaarka ee sawir qaadista. Ogow farsamooyinka loo isticmaalo xayeysiinta iyo moodada.
Haddii aad tahay naqshadeeye garaaf ah oo aad hadda bilaabayso shaqo raadis, waa inaad isweydiisaa naftaada: naqshadeynta macaamiisha ama naqshadeynta naqshadeeyayaasha?
Waxaan isku dayi doonaa qodobkaan sababta aadan shaqadaada u dhihin, maadaama macaamiisha ay kugu raadin doonaan qiimaha, ee aysan ku raadin doonin tayada.
Macluumaad ku saabsan Farshaxanka Farshaxanka oo muujinaya xaqiiqooyin xiiso leh oo aad u xiiso badan oo ku saabsan dhaqdhaqaaqan farshaxanimo ee dhashay 50-meeyadii.
Kacaankii 3D ee naqshadeynta garaafka maanta
Maqaalkan waxaan ku qaadan doonnaa socod gaaban si aan u aragno sida naqshadeynta garaafka 3D ay uga soo jeesatay asalkeeda illaa hadda.
Milton Glaser waa mid ka mid ah halyeeyada garaafyada iyo qaabeynta tifaftirka ee qarnigii XNUMXaad waxaana ku leenahay astaamo aan waligood ka bixi doonin qaabka.
Kama joogsan kartid akhrinta toddobada buug ee cajiibka ah ee naqshadeeye kasta oo garaaf wanaagsan ah ay tahay inuu ka mid noqdo maktabaddooda.
Sirta aan qarsooneyn ee Mr Wonderful: Qaab qoritaankiisa
Sirta aan qarsooneyn ee Mr Wonderful: Qaab dhismeedkeeda asalka ah ayaa loo kala qaaday dhowr qaybood si aad u isticmaali karto midka aad ugu jeceshahay.
Sidee looga fogaan karaa qishka
Waxaan soo bandhigeynaa qaabab looga hortagi karo qof kale inuu ka faa'iideysto shaqadaada, maadaama aysan jirin wax ka careysiiya wax ka badan ka shaqeynta wax waana la xadaa.
Xayeysiinta, suuqgeynta iyo dacaayadaha baraha bulshada
Waxaan dhihi karnaa furaha guusha ama waxa naga dhigaya inaan la xiriirno macaamiisheenu waxay noqon doonaan xayeysiin, suuqeyn iyo dacaayad.
Haddii waxa aad jeceshahay ay yihiin naqshad garaaf ah oo aad rabto inaad ogaato sida loola xiriiro dhagaystayaasha ama macaamiisha mustaqbalka, waxaan kugula talineynaa inaad ka sameysato kanaal YouTube.
Hababka isku dhafan ee Photoshop. Baro sida loo isticmaalo 27ka nooc ee aan la aqoon si sax ah si aad u ogaato waxa ay ku saabsan yihiin ka hor intaadan u isticmaalin si aan kala sooc lahayn.
Suuqgeynta iyo qaabeynta qaabdhismeedka shirkadaha
Suuqgeynta iyo naqshadeynta garaafka ayaa isla socda, tan iyo tan dambe waxay ka caawin doontaa shirkadaha inay sare u qaadaan fikraddooda astaan.
Isbedelada hal abuurka ee 2017
Maaddaama aad tahay naqshadeeye naqshadeeye is-ixtiraama, waa inaad had iyo jeer la socotaa wixii soo kordha ama aan ahayn, haddaba fiiro gaar ah u yeelo waxa socda 2017.
In mashruuc laga bilaabo dhexgalka waa khalad
Markaad abuureyso mashruuc waa inaad barataa inaadan ku bilaabi karin is dhexgalka, laakiin in wax walba ay leeyihiin dhowr tallaabo oo la raaco.
InDesign: Sida loo Maareeyo Hawlaha Taariikhda
Soo ogow sida loogu isticmaalo habka ugu wanaagsan ee suuragalka ah iyo dhammaan tabaha mid ka mid ah aaladaha ugu fiican xilligan, InDesign.
Naqshadeynta muuqaalka, wax walba halkan ayey ka bilowdaan
Soo ogow sheekada xiisaha leh ee bilowga naqshadeynta garaafka oo fiiri meesha aan joogno iyo waxa kale ee aan weli u baahan nahay
Naqshadeyn ama xayeysiin?
Soo ogow sababta aad u dooran karto oo aad u dooran kartid hadba waxa aad ugu jeceshahay markaad shaqeyneyso, maadaama kuwani ay yihiin laba shaqo oo aad isugu eg.
Madow iyo caddaan iyo sawir midab leh
Baro sameynta saameynta filimka Sin City adiga oo hela sawirro madow iyo caddaan iyo midabba leh si sawirradaadu u helaan taabasho hal abuur leh.
Photoshop aasaasi ah: Sida loo tirtiro qayb ka mid ah sawirka
Waxaan ku tusineynaa sida loo tirtiro qeyb ka mid ah sawirka Photoshop iyadoo la adeegsanayo aalad lakab fudud iyo burushka.
Ilaa maantadan la joogo iyo sida naqshadeeyayaasha garaafka waxaan illownay muhiimadda sawir qaadista waxaanan diiradda saarnay barnaamijyada iyo farsamooyinka iibinta
Baro sababta ay lagama maarmaanka u tahay in la fuliyo naqshad fudud, yar oo toos ah markasta oo ay suurtagal tahay mashaariicdeena ama mashaariicda macaamiisheena.